Bogga intarneedka ee telefishinka CNN ayaa daabacay xog laga soo xigtay buug ay qoreen weriyeyaal ka tirsan wargeyska The New York Time oo ka hadlaya sida madaxweyne Trump uu u neceb yahay qaxootiga ka yimid Soomaaliya.
Sida lagu sheegay qoraalkaasi CNN, bilihii ugu horreeyay ee xukunka madaxweyne Trump ayaa madaxweynuhu wuxuu Elaine Duke oo xilligaasi ahayd kusimaha arrimaha ammaanbka gudaha weydiiyay sababta ay u mamnuuci la’dahay qaxootiga ka imaanaya Soomaaliya.
Xogta ku saabsan arrintan ayaa lagu daabacay buug cinwaan looga dhigay “Colaadda Xudduudda”, waxaana buuggan lagu muujiyay aragtida madaxweyne Trump ee ku aadan dadka ka soo jeeda Soomaaliya, kuwaasi oo uu arko in ay halis ku yihiin Mareykanka.
Dhammaadkii bishii Janaayo ee sanadkii 2017 ayuu madaxweyne Trump xayiraad ku soo rogay ajaaniibta ka imaanaya siddeed waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, ka dib amar madaxweyne oo uu soo saaray.
Sida lagu xusay buuggaasi, “madaxweyne Trump iyo Stephen Miller ayaa u muuqda in si gaar ah ay u neceb yihiin Soomaalida, waxa ayna Soomaalida tusaale u soo qaadan jireen mar kastaa oo ay doonayaan in ay muujuyaan halista dadka qaxootig ahi ay u keeni karaan Mareykanka.
CNN ayaa iibsatay nuqul ka mid ah buuggaasi loogu magac daray “Colaadda Xudduudda” oo ay qoreen Julie Hirschfeld Davis iyo Michael D. Shear oo ka wada tirsan wargeyska The New York Times ka hor inta aanan rasmiyan la daabacin.
Bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, usbuucyo ka dib markii madaxweyne Trump uu arrinta Soomaalida kala hadlay Elaine Duke, oo xilligaasi ahayd ku simaha xoghayaha arrimaha ammaanka ayaa waxaa mar labaad Elaine Duke la soo xiriiray Stephen Miller oo arrimaha siyaasadda kala taliya Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo, waxa uuna ku adkeystay in la joojiyo qaxootiga ka imaanaya 11 waddan oo halis ku ah Mareykanka, gaar ahanna Soomaaliya, balse Duke ayaa arrintaasi ku gacanseyrtay, sida lagu sheegay buuggaasi.
Aqalka Cad ayaanan arrintaasi wali wax war ah ka soo saarin.
Muddadii uu madaxweyne Trump xilka hayay, waxaa uu joojiyay qaxooti badan oo ay ahayd in ay Mareykanka dib udejin ka helaan. Maamulka Trump ayaa markii ugu horreysay sanadkan 2019-kii, wuxuu qaxooti dalkaaso soo galaya ku soo koobay 30,000 oo qof oo kaliya. Bishii la soo dhaafay ee Sebteembar ayaa waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay aqalka Koongareeska u sheegtay in tiradaasi la dhimi doono oo lagu soo koobi doono 18,000 oo kaliya.
Qoraayaasha buuggan, Davis iyo Shear, ayaa buuggooda ku shaaciyay macluumaad ku saabsan ololaha Miller uu ka dhex waday maamulka Trump ee uu ku doonayay in la dhimo tirada qaxootiga soo galaya Mareykanka.
Usbuucii la soo dhaafay, qeyb ka mid ah waxa ku qoran buuggaasi ayaa la faafiyay waxaana lagu sheegay in Trump oo shir ku qabtay Aqalka Cad uu soo jeediyay in dadka qaxootiga ahi ee dalka soo galaya ay tahay in lugaha laga toogto isla markaana la adkeeyo derbiga xudduudda Mareykanka iyo Mexico, oo laga garab qodo god weyn oo biyo ka buuxaan isla markaana lagu daadiyo masas iyo yaaxaasyo.
28-kii Janaayo ee sanadkii 2017 ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay xayiraado dhanka socdaalka ah “si Muslimka xagjirka ah looga ilaaliyo Mareykanka”.
Wuxuu saxiixay amar ku aaddan tallaabooyin laga qaadayo qaxootiga iyo mamnuucidda qaxootiga Suuriya illaa amar dambe.
Wuxuu sidoo kale sheegay in qiyaastii 50,000 oo qaxooti ah ay galeen Mareykanka sanadkan 2017-ka, taas oo kala bar ka yar tiradii horey loo qaadi jiray.
Inkastoo go’aankaasi madaxweyne Donald Trump ay cambaareeyeen ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee daafaha caalamka ku nool, haddaba qaar ka mid ah xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee Yurub ayaa soo dhoweeyay tallaabadaas uu qaaday Trump.